Hilaza aminao ny ray aman-dreny tsirairay fa tamin'ny taona faharoa tamin'ny fiainany dia nosoloana ny zanany. Ny ankizy dia manomboka mihetsiketsika noho ny tsy fahampian-tsakafo, manipy kilalao, manomana "famokarana teatra" eny an-dalambe. Mandritra io vanim-potoana io dia tsy mihaino mihitsy ny ankizy ary maro no manomboka manoratra izany amin'ny famonoana, mitady ny meloka. Andeha hojerentsika hoe nahoana ny zaza no tsy mankatò ny reniny, ary raha tena diso izy amin'izany.
Nahoana no tsy mankatò io zaza io?
Tsy ny zaza foana ao anatin'ny 2 taona dia tsy mankatò ny sitrapony. Ny fanombohan'ny aretina na ny rivotra mahavariana ao an-trano indraindray dia misy fiantraikany amin'ny toe-piainan'ny ankizy ara-psikolojia. Tadidio fa tsy afaka ny hihetsika mandritra ny fotoana lava ny rafitra nateraky ny drafitra roa taona. Satria tsy mandresy lahatra azy ianao hipetraka mangina na hifantoka mihoatra ny dimy minitra. Ary ny fanerena be loatra dia mety miteraka aretina ary mety hahatonga ny zaza ho lasa tsy mety. Alohan'ny hanapahanao hanao ny fankatoavan'ny ankizy, manàna faharetana ary aza misisika, dia manasarotra ny toe-javatra fotsiny izany.
Raha ny fitsipika, "tsy mahomby ny rafitra": ny zaza dia voatery manao zavatra tsy tiany, na mandrara zavatra sasantsasany. Ara-dalàna tsara ny tsy hihainoan'ny ankizy iray mandritra ny 2 taona ary miezaka manohitra. Ny zava-misy dia amin'izao fotoana izao dia efa nahafantatra ny teny hoe "tsia" izy ary mianatra mampihatra izany amin'ny fomba tsy miankina.
Ny antony faharoa mahatonga ny ankizy kely tsy mankatò, matetika dia misy fahasamihafana eo amin'ny fanabeazana ny ray aman-dreny sy renibeny. Miezaka mitandrina mafy i Neny sy i Dada, ary mamela ny zavatra rehetra ny raibeny sy renibeny. Ary raha vao roa taona monja dia efa takatr'izy ireo mazava tsara ny toe-javatra ary manomboka mampiasa azy io.
Ahoana ny fomba hanajana ilay zaza?
Eo ambanin'ny teny hoe "hery" dia ilaina ny mahatakatra ny fitsipiky ny fihetsiky ny ray aman-dreny, fa tsy ny fomba fanerena ny zaza. Ahoana no tokony hitondran'ny ankizy raha tsy mankatò 2 taona izy?
Voalohany aloha, tokony hamaritra mazava tsara ireo antony tsy nankatoavan'ny ankizy. Raha salama izy ary ao an-trano "tsara ny andro", dia manomboha amin'ny fitadiavana ny fomba mety. Voalohany, omeo azy ny fahafahana hampitsahatra ny vazoria amin'ny tenany manokana. Amin'ny ankapobeny, ny faharoa na fahatelo taorian'ny resadresaka, dia manomboka mihaino tsikelikely ny ankizy.
Raha nampanantena famaizana sasantsasany ianao, dia ilaina ny manatanteraka izany. Saingy tokony atao amim-pahatoniana izany, manazava ny anton'ilay zaza. Ifanakalozy hevitra miaraka aminy amin'ny farany ny fitondrantenany sy ny vokany izay nitarika azy. Na ireo ankizy tsy mankato an-dalambe aza dia tsy mitsahatra mandinika ny olon-dehibe amin'ny tanjaka, raha fantany mialoha ny vokatra.
Mitranga izany fa tsy mankato ny zaza ao amin'ny ankizy madinika. Ireto misy safidy roa momba ny fivoaran'ny hetsika. Tsy maintsy takatrao fa ho an'ny sombintsombiny dia ny adin-tsaina sy ny vanim-potoanan'ny fampifanarahana, ka ny hatsikana sy ny fihetsiketsehana amin'ny mpivady voalohany dia tena ara-dalàna. Ary ratsy kokoa raha tsy mahita ny fomba fiasa amin'ny zanakao ny mpampianatra. Amin'ity toe-javatra ity, tsy maintsy manara-maso tsy tapaka ny dingana ary miboridana tsy an-kijanona ny mianatra amin'ny zazakely ny fahitany ny toe-javatra.
Fampandrosoana ara-tsaina amin'ny ankizy ao amin'ny sokajin-taona
Portfolio ho an'ny kindergarten
Lalao ho an'ny ankizy amin'ny toeram-pilasiana
Sarin'ny Paska amin'ny tanan'izy ireo ho an'ny ankizy
Ahoana no fomba tsy ahafahana manala ny zon'ny ray aman-dreny?
Ny zanak'i Harrison Ford
Fiarovana amin'ny varavarankely amin'ny ankizy
Sakafo mihinana legioma amin'ny fomba ofisialy Armeniana
Lemon-tavoahangy miaraka amin'ny meringue
Marika ny 10 Jolay
Lamina misy sary
Ahoana ny fomba fanaovana likrique?
Famaritana ny vitamina
Mpanakanto mpanamboatra marika Mark Jonathan dia mamadika ny saribakoly Barbie ho lasa mpanelanelana!
Ahoana no itiavanao azy?
Midika hoe akne amin'ny tarehy - ny pharmacie tsara indrindra sy ny fitsaboana amin'ny olona
Park Mayakovsky any Yekaterinburg
Gazebo miaraka am-patana
Ceramika amin'ny etona
Manamarika ny andron'i Petrov ny 12 Jolay
Avy eo dia telo ambony indrindra ao amin'ny kitapom-bolany Versace
Chishka avy amin'ny zava-mamy - kilasy maoderina
Gouty Arthritis - Fitsaboana
Sansevera - fikarakarana